Nhazi ọkwa na njirimara nke igwe nkpuchi
Full akpaka mmepụta nkpuchi ahu igwe, tinyere nri, plastic warara ụdị aluminum warara ntinye / agbapụ, ọnọdụ nhọrọ, ultrasonic anọ na, slicing na na, na mmepụta dị nnọọ elu, nwere ike na-emepụta 1-200 iberibe na nkeji. Isi ike ugboro ole akakabarede ọsọ ụkpụrụ ca ...
Ihe nkpuchi azu kwesiri izute EU en149: 2001 P3. A na-ejikarị ya eme ihe iji gbochie ájá ụlọ ọrụ na-acha ezigbo ọkụ na anwụrụ ọkụ n'oge ọrụ ịgbado ọkụ. Ihe kariri 99% n’ime ha nwere oru nzacha, nke kariri mmiri na mmiri oku ma obu mkpuchi nchebe ogologo oge; m ...
Họrọ igwe nkpuchi ị kwesịrị ịma ihe ndị na-esonụ
N'oge a, ọtụtụ mmadụ na-ahụ ahịa nke ihe nkpuchi na-echekwa, ma hụkwa mmepe nke ọdịnihu. Ahia buru ibu nke ukwuu. Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ịzụta akụrụngwa iji mepụta ndị na-emepụta ihe mkpuchi. Have nwere ohere ndị a ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ masks? ...
Ofụri Esịt auto ọgwụ na nkpuchi igwe enweghị ịgbado ọkụ igwe
site ha na 20-07-06
Ofụri Esịt auto ọgwụ na ahụ ike nkpuchi igwe enweghị ịgbado ọkụ igwe Ngwa: Adabara maka mmepụta nke disposable ihu nkpuchi & ọgwụ nkpuchi enweghị ntị loops Nka na ụzụ Data: 1.Auto-allign atọ na-apụta nke, ihe a ga-eri nri na, Mpụga, Fil ...
Igwe mkpuchi ntị na-ekpo ọkụ zuru oke na mkpuchi n'èzí earloop ịgbado ọkụ igwe Ọrụ: Igwe a bụ ude maka ịgbado ọkụ elastics n'akụkụ abụọ nke nkpuchi oghere site na ultrasonic, ọ chọrọ otu onye ọrụ iji tinye nkpuchi mkpuchi na belt nke na-ebufe otu n'otu, ...
Ofụri Esịt auto ọgwụ nkpuchi igwe Ngwa: Adabara maka mmepụta nke disposable ihu nkpuchi & ọgwụ na ahụ ike nkpuchi Data Nka na ụzụ: 1.Auto-allign atọ na-apụta nke, ma ...
abụghị kpara nkpuchi Ndinam igwe, sooks clamping igwe, ịwa ahụ nkpuchi Ndinam igwe, abụghị kpara ihu nkpuchi Ndinam igwe, igwe nkpuchi ihu nkpuchi, ịwa ahụ ihu nkpuchi Ndinam igwe,